मानिसहरु आफ्नै बानीको दास हुन्छन
नयाँ वर्षको पहिलो दिनको पावन अवसरमा केही शुभकार्यको थालनी गर्नका लागि आफै १५३ विसीमा आफ्नो भगवान जानुस प्रतिको आस्था संगै जनवरी महिनामा शुरु भएको हो । मानिन्छ, जानुसको दुइ वटा शिर थियो । एक शिरले भविष्य हेर्ने गथ्र्यो । अर्को शिरले वितेको कुरा । र भुतकालमा आफुलाई दुख दिएकाहरुलाई माफ गर्थे । अनि नयाँ वर्षको शुरुवात गर्थे । जानुसको दुइ शिरको आस्थासंगै नयाँ वर्ष संकल्प बनाउने, कायम गर्ने कोशिस आज सम्म पनि जारी छ । संकल्प त बनाइन्छ तर बनाएको करिव २५ प्रतिशत संकल्प चाहीँ १५ दिन भित्र नै बिर्सिसकेका हुन्छौं । वर्ष भरि गर्छु भनेर बनाइएका ती संकल्पहरु वर्ष सकिनु अघि नै बिर्सि सकेका हुन्छौं । अनि फेरि निराश छाउँछ । मैले यो वर्ष पनि आफुले गर्छु भनेको काम गर्न सकिन भन्ने लाग्छ । फेरि नयाँ वर्ष मा नयाँ संकल्प गरिन्छ । वास्तवमा मानिसहरु आफ्नै बानीको दास हुन्छन् । चाहे जतिसुकै संकल्प गरुन मानिसले आफ्नो बानी सुधार्न सकेनन् भने त्यो व्यर्थ रहन्छ । तपाइले कहिले सोच्नभएको छ ? तपाइले नयाँ वर्षमा लिएको संकल्प किन पुरा गर्न सक्नु हुन्न ? किनकि त्यो तपाईको नयाँ वर्षको संकल्प हो । अनि नयाँ वर्ष हरेक दिन, हरेक हप्ता वा हरेक महिना नयाँ रहदैन । पुरानो भइहाल्छ ।
संकल्प किन गरिन्छ ? अरुको अगााडी राम्रो , वाउ देखिन । वा अरुलाइ खुसी राख्न । होइन, आफुलाई खुसी रहन र आफ्नो जीवन जीवन सुखी बनाउन । त्यसैले संकल्प गर्नु अघि यो सोच्नुस कि के यो गरेर तपाई खुसी हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने लिस्टमा राख्नुस । तर लिस्ट बनाउदा अरु पनि सोच्नुस जस्तै, खुसी त हुनुहुन्छ तर पुरा गर्न कति समय लाग्छ । सहि समयको उपयोग गर्नुहोस । संकल्प पुरा गर्न के गर्नुपर्छ संकल्पित हुनुहोस ।
यति धेरै संकल्प पनि नबनाउनुहोस कि संकल्प नै बोझ नबनोस । सहज र छोटो बनाउनुहोस । जीवनमा तपाईले त्याग्नुपर्ने नराम्रा बानीलाई त्याग्ने संकल्प गर्नुहोस । नराम्रा आचरण, नराम्रा सोचाइ, नराम्रो संगत, नराम्रो बोली, नराम्रो दृष्टि, कुविचारहरुलाई त्याग्ने संकल्प गर्नुहोस् । भने राम्रा कुरालाई अवलम्बन गर्ने संकल्प गर्नुहोस । गरिएका संकल्प र देखिएका सपनालाई साकार बनाउने चेष्टा गर्नुहोस । उही बानीलाइ लगातार नदोहोर्उनुहोस । स्वास्थ्य नै सबै भन्दा ठुलो सम्पती हो । स्वास्थ्यलाई पहिलो नम्बरमा राख्नुहोस । स्वास्थ्यका लागि खराब लाग्ने कुलतहरु लाई त्याग्ने संकल्प गर्नुहोस । धुम्रपान, मद्यपान, दुव्र्यवसन जस्ता कुरालाई सदाका लागि त्याग्ने प्रण गनुहोस । सन्तुलित खाने बानीको विकास गर्नुहोस । डाइटिङ्गका नाममा खाना नखाने गर्नाले पनि स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्छ । साथै बढि खानाले पनि मोटोपन लगायतका समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सन्तुलित भोजनका लागि प्रतिवद्ध हुनुहोस । हरेक दिन आफ्नो लागि कम्तिमा २ घण्टा छुट्याउनुहोस । व्यायाम गर्नुहोस । ध्यान तथा योग गर्नुहोस । यसले तपाईको मन मष्तिस्कलाई आराम दिलाउछ । नयाँ वर्ष सबैको सुखद वितोस । हार्दिक शुभकामना ।